Iindaba-Ithemba lophuhliso lwengxowa yephepha okwakhiwa kuyo
Indawo yekliphu yephepha isekwe kwiphepha leplanga leplanga, umbala wahlulwe waba yiphepha elimhlophe lekraft kunye nephepha elityheli lephepha, unokusebenzisa izinto zePhepha kwiphepha elinomaleko wefilimu, isiphumo sokungena manzi, amandla ebhegi angenziwa ngokweemfuno zabathengi. maleko ezintandathu, ukuprinta kunye nokudityaniswa kwengxowa. Iindlela ezivulekileyo nezisezantsi zokutywina zahlulwe zatywinwa bubushushu, itywina lephepha kunye namazantsi echibi.
"Iphepha lesikhwama sephepha" yingxowa eyenziwe ngezinto ezidityanisiweyo. Ngenxa yeempawu ezingezizo ityhefu, ukungabi nasongo kunye nokukhuselwa kwendalo esingqongileyo kwezinto zemveliso yengxowa yephepha okwakhiwa, "ibhegi yephepha lekraft" iye yaba yimveliso yokhuselo lokusingqongileyo eyamkelwa kwilizwe liphela ngelixa isanelisa ukusetyenziswa kwabantu okuluhlaza. "Ingxowa yephepha lekraft" inokubonwa kuyo yonke indawo kwiindawo ezinkulu zokuthenga kunye nakwiivenkile ezinkulu ekhaya nakumazwe aphesheya. Unjengegorha elincinci, ehamba nathi kubomi bethu bemihla ngemihla kwaye esinceda ukuba sabelane ngomthwalo wobomi.
Ubulumko obuqhelekileyo abantu abanokuthenga kuphela izinto ezininzi njengoko benokuhamba nazo buye bachithwa kukufika kweengxowa zephepha ezihlanganisiweyo, ezimise abathengi abaninzi ekubeni bangakhathazeki malunga nezinto abangakwaziyo ukuzithathela ukonakalisa iintsuku zabo zokuthenga. Ukuba ukuzalwa kwengxowa yamaphepha okwakhiwa kukhuthaze uphuhliso lweshishini lonke lokuthengisa, mhlawumbi ukubaxwa okuthile, kodwa ubuncinci ityhile into eyenzekayo kwishishini, oko kukuthi, kumava okuthenga abathengi kuye kwaba lelona nqanaba likhululekileyo, lilungele, bekhululekile ngaphambili, ngokulula akunakuqikelela ukuba zingaphi izinto abathengi abaya kuzithenga. Kungenxa yoku, yabangela ukuba abantu bakamva banike ingqalelo kumava okuthenga kwabathengi, kwaye bakhuthaza ukuphuculwa kwenqwelo yokuthenga kunye nebhasikithi kwivenkile enkulu kamva.
Kwisiqingatha senkulungwane esilandelayo, ukuphuhliswa kweebhegi zokuthenga ezikwiphepha lenhlanhla. Ukuphuculwa komgangatho wezinto eziphathekayo kuye kwanyusa umthamo wokuthwala kunye nokwenza ukubonakala kwayo kube kuhle ngakumbi nangakumbi. Abavelisi baprinte zonke iintlobo zorhwebo kunye neepateni ezintle kwiingxowa zephepha kwaye bangena ezivenkileni nakwiivenkile kwisitalato esithengiswayo. Kude kube phakathi kwinkulungwane yama-20, ukuvela kweengxowa zokuthenga zeplastiki kwaba lutshintsho olukhulu kwimbali yeengxowa zokuthenga. Iplastikhi yokuthenga ibhegi ngenxa yexabiso layo eliphantsi, umgangatho oqinileyo, izibonelelo ezincinci kunye nokukhanya kube yindawo engenamda yeklasikhi yephepha lekhompawundi yomthunzi. Ukusukela ngoko, iingxowa zeplastiki ziye zaba lukhetho lokuqala lwabantu ebomini, ibhanti yeenkomo ngokuthe ngcembe "umgca wesibini". Okokugqibela, iingxowa zephepha ezinokusetyenziswa zinokusetyenziswa kuphela kwinani elincinci leencwadi, iimpahla, kunye nemveliso yevidiyo egameni "lendalo esingqongileyo", "yendalo" kunye ne "nostalgic".
Ixesha Post: Jan-28-2021